ဖက္​႐ွင္​ — Steemkr
ဖက်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းစက်မှုတော်လှန်ရေးပြီးကတည်းက "ဖက်ရှင်" ခဲ့ပေမယ့်အဝတ်အစားဖက်ရှင်ညျလူသားတို့တည်ရှိခဲ့ကြပြီးကတည်းကန်းကျင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာပိုင်း, ဖက်ရှင်တစ်ခုနာမ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကြိယာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ နာမ်အဖြစ်ကျနော်တို့ရွေးချယ်မှုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်လူတွေကိုသူတို့ရဲ့အဝတ်အစားများနှင့်သူတို့အဝတ်အစားဒီဇိုင်းများသို့ထိုးသွင်းသည့်အတွေးအခေါ်များနှင့်အတူပါစေ။ တစ်ဦးကြိယာအဖြစ်ကျနော်တို့တ္ထု, စိတ်ကူးများနှင့်ခေတ်ဖြစ်ခြင်းသည်အခြားဖြစ်ရပ်သက်သေခံ, ဒါမှမဟုတ်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သည်စကားလုံးက "ဖက်ရှင်" ပြင်သစ်ဘာသာစကားမှ link ကိုတစ်ခုရှိတတ်ပေမယ့်ကထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည်။ အောက်ပါအပိုဒ်မှာတော့ငါ "ဖက်ရှင်" ၏အင်္ဂလိပ်နှင့်လည်းစကားလုံးများ၏ကွဲပြားခြားနားသောသက်ရောက်မှုအကြောင်းကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
အစပိုင်းမှာကျနော်တို့၏အင်္ဂလိပ်ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ် "ဖက်ရှင်။ " ဟုအဆိုပါစကားလုံးများ၏တိုးတက်မှု "ဖက်ရှင်" မျှမျှတတဝေးကျောအချိန်အတွက်နဲ့ညီမျှတယ်။ သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးမူကွဲမူလက (အောင်) မှဆင်းသက်လာခဲ့သည့် ( "တစ်ချမှတ်ခြင်း"), နှင့်အတူလက်တင်၌ရှိ၏။ ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးပြီးတော့ကြိယာ, လကျတငျအတွက်နာမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့သူကသုံးမျိုးကွဲအဖြစ်ပွငျသစျဟောငျးပေါ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဤသုံးပါးစကားလုံးများကိုထိုကဲ့သို့သောဖက်ရှင်ပုံစံဖြစ်စေလျက်, နှင့်မျက်နှာကိုအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောအဓိပ္ပါယ်များ, ရှိသည်။ ကဖက်ရှင်တစ်ခုသို့မဟုတ်လမ်းဆိုလကဖက်ရှင်တစ်ခု ဖွစျလာတဲ့အခါသို့ရာတွင်ထိုသို့ဟောငျးမြောက်ပိုင်းပွငျသစျထဲတွင်ရိုးရှင်းသောတယ်။ တူညီသောစကားလုံးအဘိဓါန်မှခရီးထွက်ခြင်း, နောက်ဆုံးမှာအဖြစ်အလယျပိုငျးအင်ျဂလိတက်အဆုံးသတ်။ " လက်ရှိမှာ, "ဖက်ရှင်" အများဆုံးဘာသာစကားများသူတို့ရဲ့စနစ် သို့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာကလက်ခံထားသောစကားလုံးဖြစ်ပါသည်။
ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း "ဖက်ရှင်" ဟုနာမ်အဖြစ်နှင့်ကြိယာအဖြစ်အလုပ်ခန့်သည်။ ဒါဟာနာမ်အဖြစ်နှစ်ခုအဓိပ္ပါယ်များရှိပါတယ်: "တစ်ဦးကပေါ်ပြူလာသို့မဟုတ်အဝတ်အစား, ဆံပင်, အလှဆင်, ဒါမှမဟုတ်အပြုအမူ၏နောက်ဆုံးပေါ်စတိုင်" နှင့် (အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်အဘိဓာန်များ) "တစ်ခုခုလုပ်နေတာ၏ထုံးစံ" ။ ယင်း၏နှုတ်ပုံစံမှာ, က "တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ပုံစံသို့ တဦးတည်းအဓိပ္ပာယ်ကိုရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်လည်းပြုလုပ်ထားသောစာပိုဒ်တိုများ "သို့ဖက်ရှင်တစ်ခုခု" ( တက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်အဘိဓာန်များ) အဖြစ်အသုံးပြုခံရ။ သို့သျောလညျး, ဤ "ဖက်ရှင်" သာ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်စကားလုံးဘဝများစွာကိုကွဲပြားခြားနားသောဒေသများသို့ပြောပြတယ်။
esteem fashion smart entertainment
2년 전 by tnay43
Congratulations @tnay! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :
Congratulations @tnay! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
Congratulations @tnay! You receivedapersonal award!
steemitboard66 · 20일 전